ဒီတစ်ပါတ် စိတ်ညစ်စရာတွေ အများကြီး ကြုံမိတယ်။ အလုပ်တွေကလည်း များတယ်၊ လူမှုဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေတာလေးတွေလည်း ရှိတယ်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ခံစားမှုလေးတွေလည်း များတယ်၊ အိုင်တီလောကမှာ ဘာတွေ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းနေမှန်းတောင် မလေ့လာဖြစ်တဲ့ အချိန်ပေါ့။
ဒီအချိန်မှာ လေးစားမိတဲ့ လူငယ် ကဗျာဆရာမလေး တစ်ယောက်ဆီကနေ Group ဖွဲ့ပြီး ပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးလ်လေး တစ်စောင် ရောက်လာတယ်။ ဖွင့်ဖတ်မိတော့
“ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ဒီဝဘ်ဆိုက်လေးကို သွားဖတ် ကြည့်လိုက်ကြပါလား... အကျိုး မယုတ် စေရပါဘူး...း)” ဆိုတဲ့ အညွှန်း နဲ့အတူ .....
[Fri, 29 Aug 2008] Get RSS Here! [More... ]
မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းဂျာနယ်ဈေးကွက်၏ ထိပ်တန်း ငါးစောင်အတွင်းပါဝင်သော7Day သတင်း ဂျာနယ်ကို မကြာမီ အင်တာနက်ဂျာနယ်ကဲ့သို့ အွန်လိုင်း ဖတ်ရှု့နိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း7Day News Journel, Internet Journel,7Day Sport နှင့် People မဂ္ဂဇင်းတို့အား ထုတ်ဝေနေသော Imforithm-Maze ကုမ္ပဏီ၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးသောင်းစုငြိမ်းက အွန်လိုင်းမှ တဆင့် တရားဝင် ပြောကြားလိုက်သည်။
“7 Days ဂျာနယ်လည်း အွန်လိုင်း လုပ်တော့မှာပါ၊ မကြာမီ လာမည်ပေါ့ ဗျာ” ဟု ဦးသောင်းစုငြိမ်းက ပြောသည်။ Myanmar Imforithm-Maze ကုမ္ပဏီသည် အပတ်စဉ်ထုတ်၊ လစဉ်ထုတ် စာစောင်များနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော www.planet.com.mm web portal ကြီးကို လွှင့်တင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီလည်း ဖြစ်သည်။
ယခု အွန်လိုင်း စတင်ဖတ်ရှု့နိုင်ပြီဖြစ်သော အင်တာနက်ဂျာနယ်သည် .....
[Thu, 28 Aug 2008] Get RSS Here! [More... ]
သတင်းထောက် ဘ၀တုန်းက အတွေ့အကြုံလေးတွေ ပြန်ရေးမလား စဉ်းစားတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ် ၈ နှစ်က အကြောင်းလေး သတိရမိလို့ ခပ်လွယ်လွယ်ခေါင်းစဉ်လေး ပေးပြီး ရေးလိုက်မိတာပါ။
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်က မန္တလေးမြို့ အခြေစိုက် သတင်းစာ တစ်စောင်ရဲ့ အကျိုးဆောင် သတင်းထောက်လေး ပေါ့။ အမေ့ဘက်က အဘွားရဲ့ ရပ်ဆွေရပ်မျိုး မြင်းခြံသား ဗိုလ်မှူးကြီး တစ်ဦးကလည်း ၀န်ကြီးဌာနတစ်ခုမှာ ဒု-၀န်ကြီး တာဝန် ယူနေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ရေစက်ဆုံချင်တော့ သူရဲ့ အထက်အညာ ခရီးစဉ် တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်က သတင်းလိုက်ယူ ဖြစ်တယ်။
မုံရွာ အထက်အညာ ခရီးစဉ် တစ်လျောက် သူနဲ့အတူ လိုက်ရတယ်။ တစ်နေကုန် သူ့ဘေးမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်၊ ဘာတွေပြောလဲ လိုက်မှတ်လိုက်ပေါ့။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ သတင်းရေးတော့ “..လိုအပ်သည်များကို .....
[Thu, 17 Jul 2008] Get RSS Here! [More... ]